Iimpawu, ibhayoloji kunye nendlela yokuphila kwe-blue shark | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kukuxelela ngolunye uhlobo lukakrebe oluya kukunika umdla. Imalunga nayo ukrebe oluhlaza. Luhlobo lweentlanzi ezinobunzima beCarcharhiniformes kunye nosapho lweCarcharhinidae. Iyaziwa ngegama le-tintorera. Yenye yezona shark zizingelwayo emhlabeni, nangona ngexesha layo yayiyenye yezona zininzi kuzo zonke iilwandle kunye nolwandle. Ke ngoko, siza kunikezela ngokubaluleka okufunekayo kwesi sithuba.
Ungaphoswa yiyo yonke ibhayoloji, iimpawu kunye nendlela yokuphila kukrebe oluhlaza.
3 Ukuziphatha kwe-Blue shark
4 Ukutyisa nokuzala kwakhona okrebe oluhlaza
Luhlobo olungekho sikhulu kakhulu ngobukhulu. Amanqanaba omzimba asondele kwiimitha ezi-4 kunye nobude. Njengesiqhelo eyindoda iphakathi kwe-1,80 kunye ne-2,2 yeemitha, ngelixa eyasetyhini ikhula phakathi kwe-2,2 kunye ne-3,3 yeemitha. Kunqabile ukubona iisampulu ezilinganisa i-4 yeemitha. Umzimba wayo ubhityile, nto leyo eyenza ukuba ibe lukrebe olugudlisayo nolumandla ngokwaneleyo.
Kwindoda, ubunzima bususela phakathi kwama-27 ukuya kuma-55 eekhilo ngelixa owasetyhini ephakathi kwe-93 kunye ne-182 kilos. Njengoko ubona, ngumahluko ophawuleka kakhulu, owenza ukuba kube lula ukwahlula phakathi kwesini. Ngokubhekisele kumbala wayo, igama layo lithi luhlaza. Umbala owahlukileyo we-indigo ngasemva wenza umahluko omnandi kumbala ongwevu ongaphantsi. Emacaleni zinombala oqaqambileyo oluhlaza okwesibhakabhaka.
Amehlo makhulu kakhulu kwaye i-muzzle yayo inemilo etsobhileyo. Amazinyo ayo anemiphetho edibeneyo yokugaya ukutya okungcono. Ngelixa amazinyo akwinxalenye ephezulu engunxantathu kwaye enesitshixo, lawo akumhlathi ongaphantsi anemilo ethe nkqo nexineneyo. Izinyo ngalinye lithathelwa indawo ngamaxesha aphakathi kweentsuku ezili-8 ukuya kwezi-15.
Iimpiko zepectoral zazo zinde kakhulu ukuba sizithelekisa nezinye zeentlobo zookrebe. Umqukumbelo wesibini wangemva mncinci kunowokuqala. Ke yona umsila wayo, inde kakhulu, nto leyo eyenza ukuba ikwazi ukubhukuda. Bayakwazi ukudada ngesantya esiphezulu kwaye, ngokuba nobuchule obukhulu kunye nomzimba omncinci, baba ngamarhamncwa awoyikekayo.
Esi silwanyana sisasazwa kwihlabathi jikelele. Siyifumana ngokwendalo kuLwandlekazi lweAtlantic, kwiPasifiki, kuLwandlekazi lwaseIndiya nakuLwandle lweMeditera. Indawo yokuhlala yindawo ye-epipelagic kunye ne-mesopelagic yamanzi anzulu kakhulu. Ngokuqhelekileyo inokufunyanwa ibhukuda kubunzulu beemitha ezingama-350. Ikhetha amanzi ashushu kunye neetropiki kulwandlekazi kuba la maqondo obushushu abathanda ngakumbi.
Ukuziphatha kwe-Blue shark
Nangona ukrebe oluhlaza okwesibhakabhaka ukhetha ukuba ngaphezulu kumphezulu wamanzi anzulu, ebusuku uzama ukudada kufutshane nonxweme. Sisilwanyana esizimeleyo kodwa sinemikhwa efudukayo. Xa ehamba kwaye ehamba imigama emide, akahambi yedwa, kodwa kwiqela. Umzekelo, ungadada yonke indlela ukusuka eNew England ukuya eMzantsi Melika. Ukuba wenza oku kufuduka ulandela amandla e-coriolis olwandle. Oko kukuthi, ukuba uhamba ngaphesheya kweAtlantic, ulandela ipateni yewotshi. Oko kukuthi, idlula ukusuka kwiCaribbean Gulf Stream ukuya kunxweme olusempuma yeUnited States naseYurophu. Emva koko idlula emazantsi eAfrika ize ekugqibeleni ibuyele kuLwandle lweCaribbean. Oku ngaphezulu okanye ngaphantsi kohambo lokufuduka.
Ngamanye amaxesha sibabona besenza amaqela ngokwesini kunye nobukhulu. Indima yokuhlala ngokwamaqela ayaziwa ngokuqinisekileyo.
Ukutyisa nokuzala kwakhona okrebe oluhlaza
Ngoku masiqhubeke nokutya kwakho. Ngokrebe onemikhwa yokutya. Siyabona ukuba isondla iintlanzi kunye neemollusks. Phakathi kokutya kwakhe okusisiseko sifumana ii-anchovies, isardines, herring kunye ne-squid, yeyona nto ayithandayo. Ngamanye amaxesha itya izidumbu ezanyisayo ukuba ukutya okuseleyo akukho. Ngamanye amaxesha kwindlela yakhe udibana neentaka zolwandle.
Xa zizonke sifumana malunga ne-24 yeentlobo ze-cephalopods kunye ne-16 yeentlanzi.
Ngokumalunga nokuzala kwayo, sinentlanzi eviviparous ehlala iphakathi kwama-25 nama-50 wenzala. Ngamanye amaxesha abantwana abangaphezu kwekhulu baye barekhodwa kwimfazi omnye. Ubudala obuqala ukuvuthwa ngokwesondo buqala phakathi kweminyaka emi-100 ukuya kwemi-4 kumadoda nakwiminyaka emi-5 ukuya kwengama-5 kwabasetyhini. Ukuba nobukhulu obukhulu kunye nobunzima, zithatha ixesha elide ukufikelela ekuvuthweni.
Ookrebe banesiko lokuthandana eliquka ukulunywa ukusuka kwindoda ukuya kwimazi phakathi kwamaphiko okuqala nawesibini. Imazi ayifumani monakalo kuba ulusu lwayo lutyebe ngokuphindwe kathathu kunolo lwendoda. Yile ndlela indoda iyifaka ngayo imazi ngokufaka i-clamp kwindawo yokuvula. Ihambisa isidoda kwaye emva kokudibana bobabini ookrebe bohlukene. Abancinci bakhula ngaphakathi kwesingxobo seplasta. Ukukhulelwa kuthatha phakathi kweenyanga ezili-9 ukuya kwezi-12. Xa amantshontsho ezalwa, anobude nje obungama-39 eesentimitha. Abanakukhathalelwa ngabazali. Ngokukhawuleza emva kokuba bezelwe bayahlukana kwaye bayakhula ngokwabo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ukrebe oluhlaza okwesibhakabhaka kudidi "kufutshane nosongelo" kuba luzingelwa kakhulu kwihlabathi liphela. Imisebenzi yabantu, ukuhlaselwa kwabantu abancinci bezinye izilwanyana ezinkulu, kunye nokuzingela ngengozi kubangela ukuba abantu babe yingozi.
Iimpiko zolu krebe zisetyenziselwa ukwenza isuphu enqwenelekayo kwi-gastronomy yamandla ayo ekuthiwa yi-aphrodisiac. Ukutya okunexabiso elifanelekileyo kwenziwa kwisibindi sakho.
Eyona nkxalabo iphambili kukuncitshiswa okungathethekiyo kwabantu ababandezelekileyo. KuLwandle lweMeditera nje, iye yehla ngama-97% ukusukela kwinkulungwane yama-XNUMX.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga noshaka oluhlaza kunye nendlela yokuphila. Masithembe ukuba abantu abaqhubeki nokuhla ngenxa yokuzingela ngengozi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ukrebe oluhlaza